हेलमेट नलगाउने पारसलाई कारबाही गरेर दिनुपर्ने सन्देश :: सुरेन्द्र फुयाल :: Setopati
हेलमेट बिना हार्ले डेभिड्सन चलाइरहेका पूर्वयुवराज पारस शाह। तस्बिरः पारस शाहको सामाजिक सञ्जाल
केही समयअघि काठमाडौंको एक व्यस्त सडकमा एउटा नाटकीय दृश्य देखियो- पूर्वयुवराज पारस शाहलाई हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाइरहेको अवस्थामा एक प्रहरीले समातेर सडकछेउ मोटरसाइकलबाट उतारिदिए र कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
घटना साउन १५ गते साँझ महाराजगन्ज, नारायणगोपाल चोकको हो।
आफूलाई अचानक 'पुलिस थाना हिँड्' भन्ने चेतावनी आएपछि कालो ज्याकेट, कालै पाइन्ट लगाएर लामा केस फिँजाएका मोटरसाइकलधारी पारस शाह भन्दै थिए, 'जान्नँ, जान्नँ…।'
तुरून्त जम्मा भएको युवाको भीडबीच क्रुद्ध भएर उभिएका पारस भीडतिर हेर्दै भन्दै थिए, 'सबैलाई थाहा छ, म कहिल्यै हेलमेट लगाउँदिनँ नि है…!'
केही वर्षअघिदेखि पारस शाह करिब ९० लाख रूपैयाँ पर्ने हार्ले डेभिड्सन मोटरसाइकलमा बिनाहेलमेट हुइँकिने गरेका छन्। त्यो साँझ शाहको जिद्दीसामु निरीह देखिएका ती प्रहरीले पारसको हात समातेर रेडियो सेटमार्फत् थप प्रहरी बलका लागि अनुरोध गर्दै थिए।
पारस झन् झन् रिसाउँदै गए र भन्दै थिए, 'मलाई छोड्…नत्र यहाँ 'राएट् (हुलदंगा)' हुन्छ…।'
हेलमेट नलाई मोटरबाइक चलाएको अभियोगमा पूर्वयुवराजलाई प्रहरीले कारबाही गर्न लागेको दृश्य हेर्न जम्मा भएको भीड बिस्तारै बाक्लिँदै थियो।
सायद उनका हाकिमले 'छोडिदिनू' भन्ने निर्देशन दिएपछि ती प्रहरी कर्मचारीले पारसलाई छोडिदिए।
भीडमा कसैले प्रश्न गर्दै थियो, 'यहाँ सर्वसाधारण नेपाली नागरिक भएको भए के हुन्थ्यो?'
जवाफ प्रस्ट छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको कसुरमा कारबाही हुन्थ्यो।
चाबहिलको चारूमति चैत्य अगाडिको व्यस्त चक्रपथमा बाटो काट्दै पैदल यात्रु। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयाल
कुरा पारस शाहको मात्र होइन। हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल वा स्कुटर हाँक्दा कसैगरी ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर उम्किन सफल भए पनि त्यसमा सवार चालक र यात्रुले अर्को सत्य छल्न सक्दैनन्- सडक दुर्घटना र त्यसमा परेर गम्भीर घाइते वा मृत्यु हुने वा बाँचे पनि अंगभंग हुने जोखिम।
यत्तिकै पनि ट्राफिक नियम कम पालना हुने नेपालमा सडक सुरक्षा अवस्था यति नाजुक छ, यहाँ हेलमेट लगाएर यात्रा गर्ने चालकसमेत असुरक्षित रहने गरेका छन्। हेलमेट नलगाई हिँड्ने पदयात्री वा साइकल यात्रीलाई ठक्करको जोखिम कति धेरै हुन्छ भनिसाध्ये छैन।
सडक सुरक्षाको कुरा गर्दा मेरा एक मित्र भन्ने गर्थे, 'अब त काठमाडौंका सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रीले पनि हेलमेट लगाउने अवस्था आइसकेको छ।'
अत्यन्त तीव्र र लापरबाही तरिकाले, खासगरी मोटरसाइकल चलाउनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनको यो भनाइ सान्दर्भिक छ।
हुनसक्छ तपाईंले यो लेख पढ्दै गर्दा नेपालमा कहीँकतै हुन गएको अर्को सडक दुर्घटनाको दु:खद खबर सेतोपाटीमा छापिइसकेको हुनेछ। किनभने सडक दुर्घटना नेपालमा सबभन्दा धेरै दोहोरिने खबरमा पर्छ।
गत पुस १९ गते काठमाडौंको गौशालामा भएको त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाको खबरले मलाई सडक सुरक्षा र हेलमेटको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा केही लेख्न घच्घच्याएको हो। त्यो साँझ गौशालाको व्यस्त सडकमा बसको ठक्करपछि 'ब्याक गरेर घिसारे' पछि ज्यान गुमाउन पुगेकी भनिएकी दोलखाकी कृतिका कार्कीको दुखान्त हामीले बिर्सिएका छैनौं।
बसले दिएको ठक्करबाट मृत्यु भएकी कृतिका कार्की। तस्बिरः कृतिकाको पारिवारिक स्रोत
उपलब्ध जानकारीअनुसार कृतिका कार्की बकाइदा हेलमेट लगाएर स्कुटर चलाएर घर जाँदै गर्दा साँझ ६ बजेतिर गौशालाको भीडमभाड सडकमा दुर्घटनामा परेकी थिइन्।
यो लेख तयार पार्दै गर्दा फेरि अर्को दुर्घटनाको खबर सेतोपाटीमा थपियो- पुस २८ गते शुक्रबार बिहानै पूर्वी नेपालको मोरङ उर्लाबारीमा ट्रयाक्टरको ठक्करपछि कलेज जान लागेका २१ वर्षीय मोटरसाइकल चालक निश्चल बानियाँको मृत्यु हुन पुग्यो।
त्यसबीच पनि देशैभरि मोटरसाइकल र अन्य सडक दुर्घटनामा निर्दोष नागरिक मारिएका खबर आइरहेका थिए। रोकथामका प्रयास फितलो भएकाले सडक दुर्घटना 'सधैंभरिको महामारी' जस्तै भइसकेको छ।
नेपालमा सडक दुर्घटनामा ‍औसत दैनिक सात जनाको ज्यान जाने गरेको छ। दैनिक १४ जना घाइते हुन्छन्।
सन् २००० पछि देशमा यातायात साधनको संख्यामा वृद्धि हुने क्रम बढेसँगै सडक दुर्घटनामा मारिने निर्दोष मानिसको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांक हेरौं:
• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सडक दुर्घटनामा २७८९ मानिसको मृत्यु, ४३७६ घाइते
• २०७६/७७ मा २२५१ जनाको मृत्यु, ४६१५ घाइते
• २०७७/७८ मा २५११ जनाको मृत्यु, ६४५३ जना घाइते
• २०७८/७९ को मंसिरसम्म ११८० जनाको मृत्यु, ३०६७ घाइते
कोरोना भाइरस विश्वव्याधिको प्रभाव नेपालमा पनि भित्रिएपछि लकडाउन गर्न थालियो जुन अवधिमा सडकमा सवारी साधनको संख्या पातलियो। तैपनि देशमा सडक दुर्घटना संख्यामा कमी आउन सकेन। असाध्यै तीव्र र अनियन्त्रित भई हुँइकिएका माइक्रोबसदेखि कार अनि एम्बुलेन्ससम्म घातक दुर्घटनामा परी नै रहे।
दुर्घटनाको महँगो मूल्य
गौशाला कालोपुलको व्यस्त सडकमा मोटरको ताँती। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयाल
विज्ञहरू भन्छन्- सडक दुर्घटनाले पीडितको ज्यान मात्रै लिँदैन। बाँच्न सफल मानिसलाई गम्भीर र सामान्य घाइते मात्र बनाउँदैन। उनीहरूलाई जीवनभरिका लागि अपांगताको प्रमाणपत्र मात्र दिँदैन। सडक दुर्घटनामा मारिने प्राय: मानिस घरका लागि रोजीरोटी कमाउने युवा अवस्थाका हुने हुँदा दुर्घटनाले बालबालिकालाई अनाथ बनाइदिन्छ। परिवार तथा आफन्तमाथि आर्थिक बोझ थोपरिदिन्छ।
बढ्दो सडक दुर्घटना समग्र आर्थिक विकासको बाटोमा बाधक बन्ने गरेको पाइएको छ। सडक दुर्घटनाले देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमै क्षति पुर्‍याइदिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सडक दुर्घटनाले धेरै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ३ प्रतिशत क्षति पुर्‍याउने गरेको छ।
अझै दु:ख लाग्ने पक्ष यस्तो छ- अधिकांश सडक दुर्घटना नेपालजस्ता कम आय भएका देशमा हुने गरेका छन्। जहाँका ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका कलिला मानिसको अकाल मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाले पुर्‍याइरहेको क्षतिबारे तथ्यांक। श्रोत: roadsafetyfacility.org
सडक दुर्घटनाको विश्वव्याधि र त्यसले नेपाल र अन्य देशहरूमा पुर्‍याइरहेको क्षति कम गर्न अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरू जारी छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकजस्ता संस्थाले आवश्यक राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माणका साथै जनचेतना जगाउन सरकारलाई घच्घच्याउन थालेका छन्।
सन् २०२० सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघीय महासभाले विश्वका सबै देशमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने चोटपटक र मानवीय क्षतिलाई सन् २०३० सम्म आधा घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पारित गरिसकेको छ। यो लक्ष्य भेट्टाउने गरी काम गर्न अब नेपालजस्ता देशसामु दबाब बढ्न थालिसकेको छ।
त्यसका लागि नेपालले आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै सवारी चालकको शिक्षा, दक्षता, हेलमेट र सिट बेल्टजस्ता सुरक्षा उपकरणको अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित गर्दै सानादेखि ठूला खाल्टाखुल्टी हुने सडकको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नेजस्ता थुप्रै काम गर्न अत्यावश्यक भइसकेकोमा विज्ञले जोड दिने गरेका छन्।
साथै, सडकमा आउने सबै सवारी साधनको अवस्था चुस्तदुरूस्त राख्ने र सबै सडकमा पर्याप्त सुरक्षा संकेत चिह्नहरु राख्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिइरहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा हरेक वर्षा याममा आयोजना हुन थालेको कोरा साइकल दौडमा हेलमेट लगाएर सहभागी हुन भेला भएका युवा-युवतीको जत्था। सौजन्य: Facebook.com/ktmkora
कयौं नेपालीका 'प्यारा' जस्ता देखिने पूर्वयुवराज पारस शाह अझै पनि बिनाहेलमेट सहरी सडकमा बतासिइरहेका देखिन्छन्, भेटिइन्छन्। यदाकदा अन्य नेपाली पनि लापरबाही गर्दै बिनाहेलमेट दुईपांग्रे हुँइक्याइरहेका भेटिइन्छन्।
तर हृदय हर्षित तुल्याउने अर्को दृश्य पनि सामान्य हुन थालिसकेको छ- थुप्रै नेपाली साइकलचालक, खासगरी माउन्टेनबाइक प्रेमीहरूले बढ्दो रूपमा बकाइदा हेलमेट लगाएर सहर घुमिरहेको वा सहर वरिपरि उकाली-ओराली गरिरहेको तपाईं हामीले देखिरहेकै छौं।
त्यसले सडक सुरक्षाको फाँटमा केही आशाको सञ्चार गराएको छ।
फेरि पूर्वयुवराज पारसकै हेलमेटको प्रसंग।
हो, केही वर्षयता उनी हार्ले डेभिड्सन मोटरसाइकलमा बिनाहेलमेट हुइँकिने गरेका छन्, ठीक त्यसैगरी जसरी अमेरिकाका केही राज्यका हार्ले डेभिड्सन समूहका सदस्यले हाइवेमा बिनाहेलमेट मोटरसाइकल हुँइक्याउने गर्छन्।
ती अमेरिकी मोटरसाइकलधारीलाई उनीहरूका राज्यका कानुनले हेलमेट नलगाइकनै आफ्नो जिउ-ज्यान जोखिममा पार्दै बेतोडले मोटरसाइकल हाँक्न छुट दिएको छ।
तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन।
हेलमेट लगाएका पारस शाह?
मोटरसाइकल चालक र पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेलमेट लगाएको अवस्थामा दुर्घटना भए ज्यान जाने वा गम्भीर घाइते हुने क्रममा कमी आउने विज्ञको सुझाव छ। दुवै यात्रुले हेलमेट लगाएको विरलै देख्न पाइन्छ। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयाल
जानकारहरू भन्छन्- नेपालको ट्राफिक ऐनले मोटरसाइकल चालक मात्र होइन, पछाडि बस्ने यात्रुले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
त्यो कानुन पारस शाहसहित सबै मोटरसाइकलप्रेमीले पालना गरे दुर्घटनामा दुईपांग्रे सवारी चालक र यात्रुको ज्यान जाने वा गम्भीर घाइते हुने क्रममा निकै कमी आउने सडक सुरक्षाविद्को आशा छ।
ब्रिटेनको ब्रिस्टोल विश्वविद्यालयमा चोटपटक तथा सडक सुरक्षाबारे अनुसन्धान गरेका अध्येता पुष्पराज पन्तका विचारमा पारस शाहले हेलमेट लगाउन थालेर सकारात्मक सन्देश दिन सक्नेछन्।
पन्त भन्छन्, 'हेलमेट लगाउनु झन्झटिलो हुन सक्ला तर पारस शाह उच्चकोटीको सुरक्षित हेलमेट किन्न सक्षम छन्। जोखिमपूर्ण अवस्थामा उनलाई आफ्नो जिउ-ज्यानको सुरक्षाका लागि हेलमेट (पूर्वराजाको) श्रीपेचभन्दा निकै बढी उपयोगी साबित हुन सक्छ।'
'यसो भन्नु विवादास्पद हुन सक्ला तर सही गुणस्तरको हेलमेट (जसलाई निकै भारी ट्रकको पांग्राले किच्दा पनि फुटाउन वा कुच्याउन सक्दैन) ले डरलाग्दा दुर्घटनामा परेका मोटरसाइकल चालक वा यात्रुको ज्यान बचाएका धेरै उदाहरण विश्वमा छन्।'
लामो समय नेपाल प्रहरीको ट्राफिक इन्स्पेक्टरका रूपमा काम गरी अवकास पाएपछि हाल ललितपुर महानगरमा नगर प्रहरी प्रमुख रहेका सीताराम हाछेथुका विचारमा पारस शाहले अब हेलमेट लगाउन थालिहाल्नुपर्छ, 'हेलमेटले उहाँको जिउ-ज्यानको सुरक्षा मात्रै गर्दैन। उहाँले हेलमेट लगाएर आफू एक नमूना प्रशंसा पात्र बन्न सक्नुहुन्छ र धेरै युवालाई सुरक्षित हेलमेट लगाएर दुईपांग्रे चलाउन प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ।'
पक्की पुल नबनिसकेकाले सुदूरपश्चिम नेपालको महाकाली नदीमाथि बनाइएको दोधारा-चाँदनी झोलुंगे पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य मोटरसाइकल चालक र यात्रु। लामो पुलको यात्रा जोखिमपूर्ण भए पनि तस्बिरमा चालकले मात्र हेलमेट लगाएको देख्न सकिन्छ। तस्बिर: सुरेन्द्र फुयाल
सडकमा सुरक्षित यात्राका लागि पाटपूर्जा राम्रो अवस्थामा भएको मोटर चाहिने नै भयो। खाल्टाखुल्टीरहित र पर्याप्त ट्राफिक संकेत बत्ती र रेखा चिह्न भएका सडक अपरिहार्य हुनै नै भए। नेपालमा चलन छैन तर मोटरचालक र प्रत्येक यात्रुका लागि सिटको पेटी पनि चाहिने नै भयो।
मोटरसाइकल चालक तथा यात्रु दुवैले, हो चालक तथा यात्रु दुवैले, किनभने केही नसमातेको र हेलमेटबिनाको यात्रु झनै जोखिममा हुने गर्छ, अनिवार्य हेलमेट लगाउनुपर्ने नै भयो।
हेलमेट लगाउनुपर्ने अर्को कारण यस्तो छ- नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाका पीडितमध्ये एकतिहाइ मोटरसाइकल यात्रु रहने गरेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सही तरिकाले, सही गुणस्तरको हेलमेट लगाएमा दुर्घटनाका बेला घातक चोटपटक लाग्ने जोखिममा ४२ प्रतिशतले कमी आउन सक्छ र टाउकोमा चोट लाग्ने जोखिम त झनै ६९ प्रतिशतले घट्छ। त्यस्तै गाडी चलाउँदा सिट बेल्ट लगाएमा चालक वा अगाडि बस्ने यात्रुको मृत्यु हुने जोखिम ४५ देखि ५० प्रतिशतले घट्छ। सिट बेट लगाएर पछाडि बस्ने यात्रुलाई चोट लाग्ने जोखिम २५ प्रतिशतले घट्छ।
गाडीभित्र बालबालिकालाई 'चाइल्ड रिस्ट्रेन्ट' भनिने सुरक्षा उपकरण लगाइदिएमा दुर्घटनाका बेला मृत्यु हुने जोखिम ६० प्रतिशतले घट्छ।'
अझै महत्वपूर्ण कुरा यो हो: सवारी साधनको गति अथवा 'स्पिड'।
'तीव्र गति जीवन क्षति' को रटान ट्राफिक प्रहरीले त्यसै गर्ने गरेको होइन। अधिकांश ठूला दुर्घटना गति सीमा अर्थात् 'स्पिड लिमिट' को अवज्ञा गर्दा हुने गरेका छन्। जस्तो, विद्यालय र आवासीय क्षेत्रमा २५, कोटेश्वर-भक्तपुर सडकमा अधिकतम ५० र धुलिखेल-बर्दिबास राजमार्गमा ३० किलोमिटर प्रतिघन्टा गति सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ।
यस्ता नियममा कडिकडाउ गर्न ट्राफिक प्रहरीले सबभन्दा पहिला त पूर्वयुवराज पारस शाहलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ जो बिनाहेलमेट जोखिमपूर्ण ढंगले मोटरसाइकल हाँक्छन्।
पारसलाई गरिने कारबाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन रोक्न सबैलाई सकारात्मक सन्देश दिनेछ।
सेफ ट्राभल्स् (शुभ यात्रा)!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ३०, २०७८, २०:५४:००